Warye Shariifka: “Musuqmaasuq Daran Ayaa Ka Jira Wasaaradda Warfaafinta” – Shabakadda Amiirnuur
December 31, 2017 6:37 am by admin Views: 87
Wasaaradda warfaafinta ee dowladda federalka waxay kamid tahay wasaaradaha ugu musqmaasuqa badan iyadoo dadka madaxda ka ah ay yihiin kuwa markoodii hore kasoo shaqeyn jiray NGO-yada iyo ururada daneysiga iyo musuqmaasuqa ku caan baxay.
Wariye Maxamad Shariif ayaa waxa uu sheegay in xarunta gudaheeda ay shaqaalaha Radio Muqdisho ku daadiyeen waraaqo ay uga cabanayaan musuqmaasuqa, qabyaaladda iyo nin tooxsiga, warqadahaas oo sidoo kale lagu qoray magacyada ragga ugu daran oo ay kamid yihiin Eng Yariisow oo ah wasiirka iyo rag kale.
Shariifka ayaa sheegay in isaga looga shakiyay inuu warqadaha daadiyay kadibna lagu eryay warqad uu soo qoray wasiir Yariisow, waxaana uu baaq calaacal ah u diray madaxda dowladda federalka ah isagoo u sheegay inuusan ammaankiisa sugnayn islamarkaana xaaladdiisu liidato.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in Yariisow uu ka biyo diiday isku dayo badan oo isaga dib loogu soo celin lahaa taasoo uu ku micneeyay inuu isaga si gaar ah ula dirirsan yahay.
Warbaahinta dowladda ayaa noqotay midda ugu dhageysiga yar bulshada Muqdisho waxaana ugu wacan wariyaasha oo ah kuwa calooshood u shaqeystayaal ah oo u taagan iney xayaysiis been ah u sameeyaan shisheeyaha iyo kuwa la shaqeeya si ay sandareerto uga helaan.